Ikhekhe lekhekhe kunye nebhekoni | Ukupheka kweKhitshi
Ikhekhe lekhekhe kunye nebhekoni
Ndiyayithanda i amaqebengwana amnandi. Bangazilungiselela kwangaphambili kwaye bakhonze bobabini kushushu kwaye kubanda njengesiqalo okanye ikhosi ephambili. Le khekhe leek kunye nebhekoni esiyilungiselela namhlanje ilula ngakumbi. Njengoko uza kubona, akukho ndlela inokuhamba ngayo.
El ikhekhe lebhekoni Ifuna i-leek kunye nebhekoni njengenyathelo langaphambili; into engayi kukuthatha ngaphezulu kwemizuzu eli-15. Okukhona upheka ibhekoni, kokukhona incasa yayo iya kubakho kwikhekhe. Ukusuka apho kuya kubakho i-oveni eya kwenza uninzi lomsebenzi; Kufuneka ulinde ukungabikwa.
Ikhekhe leek kunye nebhekoni
Le bhekoni kunye nekhekhe leek yenziwe ngokulula ngezithako eziqhelekileyo. Kuyinto emnandi kakhulu kwaye ingaboniswa njengesiqalo sokuqala okanye ikhosi ephambili.
Uhlobo lweRipeipe: Ukungena
Iilikhi ezinkulu ezi-4
200 g. ibhekoni kwimicu
100 g. itshizi egayiweyo
Sitshisa i-oven ukuya kuma-190ºC.
Sinqumla isahlulo esimhlophe iileksi kwaye uzifake nge-drizzle yeoyile epanini kude kube mnyama kwaye ithambe. Xa sigqibile, sisusa i-leek nge-spoon edibeneyo kwaye siyibeke kwi-colander ukucoca ioli.
Ke kwioyile efanayo, Siqhotsa ibhekoni. Siyikhupha kwaye siyigcine.
Kwisitya esikhulu sawabetha amaqanda nobisi, ukhilimu kunye nesiqingatha samasi.
Yongeza i-leek kunye nebhekoni kwaye udibanise kakuhle. Ixesha kunye neetyuwa kunye nepepper.
Umxube siwuthululela kwi isikhunta esidlulileyo kwaye ufefe okuseleyo kweshizi ngaphezulu.
Sisa eziko Kwaye upheke i-45 min. ngo 190ºC okanye kude kubekwe. Ukuba sibona ukuba umphezulu umdaka kakhulu ngexesha lenkqubo, siyigubungela ngefoyile yealuminium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Iiresiphi zemifuno » Ikhekhe lekhekhe kunye nebhekoni
M. Dolores sitsho
Mholo!. Okwangoku ndiyenzile ngesiqingatha sezithako endaweni yobisi oluqhelekileyo, ubisi oluphuphuma, ukulichitha! Jonga indlela ebukeka ngayo! Enkosi.
Phendula uM. Dolores